February 2020 – Shwe Likes
ပရိသတ် ကြီးရေ ဝတ်မှုံရွှေရည် ကတော့ နိုင်ငံကျော်ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အပြင် ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု (၂)ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထိပ်တန်းဝါရင့်မင်းသမီးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီးကျရာဇာတ်ရုပ်ကို အပီပြင်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ပါပဲနော်။ အမာခံပရိသတ်တွေ ဘယ်လောက်များ လဲဆိုရင် We Love Group တွေအပြင် We Love Page တွေပါ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးတစ်လက်ပဲ
ရွှေမြယာကွန်ဒို ရှိ လင်းနို့ အကောင် (၁)သန်းခန့် နေထိုင်သည့် လင်းနို့သိုက် အား ရှင်းလင်းရန် ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်း မင်္ဂ လာတော င်ညွန့်မြို့နယ် ရွှေမြယာကွန်ဒို၌ ရှိနေသောလင်းနို့ (ခန့်မှန်း အကောင် တစ်သန်း) ခန့်အား (၂၇. ၂. ၂၀၂၀) တွင်ရှင်းလင်းရန် အတွက် ဖို့မြေရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ တောင်ညွန့်ကြီးရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျန်းမာရေးဌာနမှဆရာ ဆရာမများနှင့်
နေဝင်း ကတော့ ဇနီးလောင်း အိမ့်ချစ်ချော နဲ့ အတူအ မှတ်တရတွေဖန်တီးဖို့ သူ့ရဲ့ မွေးနေ့မှာ မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပသွားမယ့် အကြောင်းပြောပြလာပါတယ်။ အဆိုတော် နေဝင်း(Snare) နဲ့ ချစ်သူလေး အိမ့်ချစ်ချောတို့ ရဲ့ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲကို ဧပြီလ ၂၅ ရက်နေ့ မှာ ကျင်းပသွား မယ်လို့ သိရပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲ ကိုတော့
ပ ရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကတော့ လတ်တလောမှာ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာသုံးစွဲမှုကို ခဏရပ်ဆိုင်းမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာထက်ကနေ ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဆက်ဆံလို့ရတဲ့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းကတော့ Facebook သုံးခြင်းကို ချမ်းမြေ့မောင်ချို ကတော့ ရပ်နားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
စကားများရာ မှ ဆောင်းဘောက် ကို ရိုက်ခွဲ လိုက်တဲ့ သားအရင်း ကို ဖအေက ထန်းလှီးဓားဖြင့် တချက်ထဲ ထိုးသတ်
ယင်းမာပင် ခရိုင် ပုလဲမြို့နယ် တွင် ဖခင်ဖြစ်သူက သား အရင်းအား ဓားဖြင့် ထိုးသတ် သည့်ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) ရက်ညပိုင်း က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည် ။ ပုလဲမြို့နယ် ဂျပ်ကျေးရွာ ရှိ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် အမျိုးသား သည် ဖေဖော်ဝါရီ
အဖေဖြစ်သူ ဦးအောင်ရင်ကို နောက်တိုးတရားခံ အဖြစ် တရားရုံးမှာ သက်သေတင်ခဲ့တဲ့ မိုးအောင်ရင်ရဲ့ရည်းစားဟောင်း
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ရဲ့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ မခင်မြတ်နိုး ကတော့ အဆိုတော် ဦးအောင်ရင် ကို နောက်တိုး တရားခံအဖြစ် ရုံးချိန်းမှာ သက်သေတင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာပါတယ်။ မိုးအောင်ရင်ကို ကာမလိမ်လည်မှုနဲ့ တရားစွဲဆိုထားတဲ့ မခင်မြတ်နိုးကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတယ်လို့ စွပ်စွဲပြောဆိုထားတဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မိုးအောင်ရင်နဲ့အတူ ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဦးအောင်ရင်လည်း ပြောဆိုထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဦးအောင်ရင်ကို နောက်တိုးတရားခံအဖြစ်